Ny akanjom-bolo maingoka dia toetra iray tsy azo ivalozana amin'ny akanjo amin'ny fahavaratra. Tsy azo atao afa-tsy ny fialan-tsasatra any an-dranomasina ihany izy io, fa koa ho an'ny antoko iray ao amin'ny dobo na ny fialan-tsiny fotsiny dia tsy ny natiora. Ny tsara indrindra dia ilaina ny hananan'ny vehivavy iray setroka 2-3 samihafa, izay azo arovana arakaraka ny toetran'ny sisa sy ny tanany. Na dia izany aza, ho an'ny vehivavy maro, ny safidin'ny kamboty dia lasa adin-tsaina mahatsiravina, satria tsy ny olon-drehetra no tia ny fijery ny vatany tsy misy niangana ao amin'ny fitaratra. Ahoana ny fisafidianana ny akanjo bongo tsara ary mbola ho afa-po amin'ny fividianana lavorary? Momba ity eto ambany ity.
Ahoana no hisafidianana akanjo volom-borona?
Tsy fantatrao ny fomba hisafidianana ny lokon'ny bavy? Avy eo, jereo ireo tahirin-tsolika lehibe. Ireto ny fanavaozana farany ao amin'ny tontolon'ny lamaody fatoriana, izay, angamba, efa nanandrana ny kintan'i Hollywood. Amin'ny taona 2014, amin'ny fomban'ny lamaody mahatalanjona mamirapiratra, voasarika ho amin'ny lamaody tsy mahazatra. Ny mpanamboatra dia manandrana ny lokon'ny fuchsia manankarena, maitso maitso, volomparasy, manga sy volomparasy. Ireo loko ireo dia mifanohitra tanteraka amin'ny hoditra voatsatoka, mamafa ny lokony tsara tarehy vita amin'ny varahina. Ny loko toy izany dia miseho betsaka ao amin'ireo tahirin-tsarin'ny marika Self, Shе sy Incanto.
Raha te haka sary sokitra ianao dia miantsoa ireo mofomamy maromaro momba ny marika Amore & Sorvete, Kupasi sy Marysia Swim. Sarin'ireo hazo palmia maitso, lisy tsara tarehy, rameva sy kibay madinika dia manara-maso tsara ny modely. Ny sasany amin'ireo mpanakanto sasany dia manamboatra ny bodice amin'ny applet floral, izay toa vehivavy.
Inona no loko nofidian'ireo mpihinana swimwear an'ny kilasy? Ny sora-tanana Classic, ohatra, ny tara-pokontany, ny dian-tongotra na ny tongotra, dia mety tsara. Ny modely toy izany dia tsy miala amin'ny lamaody, koa aza manahy ny maha-zava-dehibe ny modely voafidy.
Voafehy na mivoha?
Ity fanontaniana ity dia nanontanian'ny vehivavy maro. Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ny vehivavy dia misafidy ny modely samihafa, amin'ny fandinihana ny ketsa fohy ho toy ny andian-taona vulgar. Raha ny marina, ny akanjo fitafy izay manasongadina ny toetranao ary mampifantoka ny sainao. Mipoitra ara-boajanahary amin'ny tarehimarika rehetra, ary ny lamin'ny tarehimarika dia tsy mahasalama ary mahaliana. Alohan'ny nisafidianana akanjom-pisidina dobo, dia tsara ny mianatra ny fomba amoahana azy:
Mayo. Modely vita amin'ny marika mitovitovy. Ny endri-tsoratra dia mety ho V-endrika na amin'ny endriky ny fo.
Plandzh. Modely amin'ny sary roa lehibe - anoloana sy aoriana. Mamelatra ny silhouette mivantana ary manantitrantitra ny tratra.
Tadin. Ny kofehy ao amin'ity akanjo ity dia mifamatotra amin'ny vozony. Ny tratra dia voaaro tsara, izay zava-dehibe ho an'ny fialana mavitrika.
Ny tank. Ao anatin'io modely io dia misy kalsioma nohamona izay manohana ny tratra ary manome azy ny endrika tiana. Mety tsara ho an'ny hatsaran-tarehy lehibe.
Avo-vozony. Modely amin'ny fanatanjahan-tena miaraka amina fehezanteny kely manoloana. Tena tsara ho an'ny vehivavy maniry ny manefa ny vatana.
Ireo modely ireo dia hifanaraka amin'ireo tovovavy amin'ny fahasarotana, hany ka azo heverina ho manerantany. Ny hany tokana - tsy mandray anjara amin'ny tanany mahafinaritra akory izy ireo. Raha ity fotoana ity dia ho anao fototra, dia mendrika ny hiverina amin'ny sehatra samihafa. Amin'ny karazana bodiska sy sokajy dia sokajina ho ireto karazany manaraka ireto: bikini, bando, tank ary akanjo akanjo. Ny modely monokini dia aseho koa, izay zavatra iray eo amin'ny bikini sy bobongolo.
Ahoana ny fisafidianana akanjo amin'ny vehivavy bevohoka sy bevohoka?
Alohan'ny hisafidianana akanjom-bovo iray dia mila mandinika ny karazany misy azy ianao. Raha manana tavy lehibe sy feny tery ilay ramatoa, tsara kokoa ny mividy modely amin'ny tady mitovitovy amin'ny V-neck. Ny soroka mitovitovy amin'ny hantsana lava dia azo afatotra amin'ny loko matevina amin'ny farany ambany sy ny loko maivana eo amin'ny tampon'ny leotard. Ao amin'ny kaopy boribory dia tsy voatery ho taolam-paty sy foitra sarobidy izay hamorona endrika tsara tarehy ao anaty tratra ary manosika kely azy. Raha ny fomba fanao, dia tsara kokoa ny misafidy ny modely, na ny akanjo miaraka amin'ny tendrony kely matevina ary kofehy mavomavo eo amin'ny andilany.
Ny vehivavy bevohoka dia modely tsara indrindra amin'ny tankini, ahitana t-shirts sy kofehy mofomamy. Hanafina ny vovoka izy ary hiaro azy amin'ny taratra UV tsy ilaina.
Akanjo lava mitafy lava lava
Sarafan ao amin'ny gorodona - ireo modely maoderina fanao amin'ny lamaody
Toetra tsy manan-tsahala
Ny Fiangonan'i St. Ludmila
Tavy fotsy sy jeans
Manitsy ny valindrihana
Jamba any amin'ny efitra fandroana
Alexandra - andron'ny anjely
Clinker panelan'ny fasana
Mpanafintohina miaraka amin'ny hatsiaka amin'ny ankizy
Hygroma amin'ny tongotra
Ny lapan'i St. Hilarion
Saida Voragi, izay nilalao mpivaro-tena tao amin'ny "Game of Thrones", teo amin'ny fiainany dia niditra tao anatin'io asa tanana io ihany